Umnqamulajuqu wokucela ukungasebenzi | Ezezimali Zomnotho
USusana Maria Urbano Mateos | | Ikhaya
Ukuntuleka kwemisebenzi kuyisimo esinzima kulabo ababhekene naso, futhi ikakhulukazi ngezikhathi lapho umcimbi usimangaza ngemuva kokuthola isikhathi sokusebenza; Kepha, noma kungesona isimo esifiseleka kunoma ngubani, kungcono ngaso sonke isikhathi ukuthi uxwayiswe kusengaphambili futhi wazi ukuthi kufanele siziphathe kanjani kulesi simo. Ngakho-ke le ndatshana ibhalelwe ukuthi sikwazi ukuthola umhlahlandlela wokuthi singazilungiselela kanjani, futhi esimweni lapho sizithola sisesimweni esinjalo, sazi izikhathi zokugcina nezinyathelo okufanele sizilandele ukwazi ukucela ukungasebenzi.
1 Yini okufanele uyenze ngaphambi kokuxoshwa kwethu
2 Sizokwenzenjani uma sixoshwa
3 Ukucela ukungasebenzi
Yini okufanele uyenze ngaphambi kokuxoshwa kwethu
I-Los amathiphu okuqala ziphathelene ne ngaphambi kokuba sixoshwe; Futhi noma singafuni lokho kwenzeke, kuhlala kubaluleke kakhulu ukuthi sihlale sinemibhalo yethu efanelekile; Lokhu kuzosisiza ukuthi singagcini nje ngokucela ukungasebenzi ngalesi sikhathi esinikeziwe, kodwa futhi kungasebenza njengesivikelo esisemthethweni enkampanini uma kwenzeka ukuxoshwa kungafanelekile. KephaYimiphi imibhalo okufanele siqiniseke ukuthi sinayo?
Okululeka kakhulu ukuthi uholelwe ezinyangeni eziyi-12 ezedlule osebenze kuzo, le mibhalo izosisiza ukuthi siqinisekise umholo nemali esinayo ngomsebenzi wethu. Omunye umqulu obaluleke kakhulu yikhophi yesivumelwano umsebenzi owawugcinwa ngaso, ukubaluleka kwalo mbhalo kuhlala ekutheni uqukethe izigaba esivuma ukusebenza ngaphansi kwazo. Futhi ekugcineni, kungakuhle ukuthi sibe nezizathu zamahora esinawo. Ukuba nayo yonke le mibhalo kuzosisiza ukuthi sikwazi ukuqinisekisa ngokusemthethweni ukuthi besisebenza enkampanini nokuthi umholo wethu ubuyini.
Ukuba nemibhalo kuhlale kunconywa ngoba uma sesiphumile enkampanini kuzoba nzima kakhulu noma kucishe kungenzeki ukuthola eyodwa yalezi; Ngaphezu kwalokho, ngeke zisisebenzele kuphela uma kwenzeka kufanele cela ukungasebenzi, kodwa futhi neminye imicikilisho.
Sizokwenzenjani uma sixoshwa
Uma sesazisiwe ukuthi izinsizakalo zethu ngeke zisadingeka enkampanini kubalulekile ukuthi sihlale sizolile futhi sicele eminye imibhalo okufanele ngokukhethekile ibe nokuqukethwe okuthile, sizinake lezi zincomo.
Into yokuqala okufanele siyenze Isicelo siyikhophi yencwadi yokuxoshwaKubaluleke kakhulu ukuthi uma siyicela futhi silethelwa yona siyiqhathanise neyangempela yenkampani ukuze sikwazi ukuqinisekisa ukuthi iyikhophi yoqobo, kubalulekile ukuthi inesiginesha noma isitembu esikwenza kusebenze. Kule ncwadi, kufanele kuchazwe usuku owalethwa ngalo umqulu, ukuze sikwazi ukuwethula uvumelekile futhi sinemininingwane efanele ukuthi sisebenze isikhathi esingakanani kuleyo nkampani.
Iseluleko esisodwa esingasiza kakhulu ukuthi uma incwadi silethelwa yona, ngaphambi kokusayina, kubalulekile ukuthi sibhale le nganekwane “akuhambisani"Lokhu kungenxa yokuthi uma kwenzeka siqhubeka nokufaka le nkampani icala, singawusebenzisa lo mbhalo ukukhombisa ukuthi akubanga yithina esishiye phansi.
Ngokomthetho, igama okumele silifake enkampanini yileli 20 izinsuku zebhizinisi Lesi sikhathi siqala usuku lokuqala lapho singasabikeli ukusebenza enkampanini. Kubalulekile ukuthi ngaphambi kokuba sithathe isinqumo sokumangalela kufanele sibonisane ngokufanele nomuntu oyingcweti emkhakheni wezomthetho, ukuze sikwazi ukuqhubeka ngokuqina nangokuqiniseka okukhulu kunqubo yezomthetho.
Cishe, okufanele sikwenze ukufaka icala ukufaka ifayela le- ukuvota kokubuyisana, okumele ilethwe kwinkonzo yokulamula ekuphathweni okuzimele; Uma kwenzeka kungafinyelelwa esivumelwaneni nale nkampani, isinyathelo esilandelayo ukufaka icala enkantolo ebizwa ngokuthi yinkantolo yezenhlalakahle.
Kuze kube manje ukungabaza kungavela Ngabe kuyisidingo yini ukuthi simangalele inkampani ngokuxoshwa ukuze sicele isiteleka? Futhi impendulo eqonde kakhulu inguye, akudingeki ukuthi ufake isimangalo ukuze ucele ukungasebenzi. Lokhu kungenxa yokuthi umthetho ubamaka njengezinqubo ezihluke ngokuphelele, ukuze ngamunye wabo abe nochungechunge lwezidingo ezehlukene nezizimele, izikhathi zokugcina nezinqubo.
Kodwa-ke, kuyadingeka ukuthi kushiwo izimo ezimbili lapho kungenzeka khona ukuthi insizakalo yokuqashwa ingacela ukuboniswa kwesidingo, isimo sokuqala lapho kusolwa khona ukuthi kube nesivumelwano phakathi komqashi nomsebenzi ukulingisa ukuxoshwa, iqiniso lokuthi lizohlukaniswa njengokukhwabanisa. Futhi isimo sesibili yilapho inkampani ingazange iyinikeze incwadi yokuxoshwa, kanye nokwazisa insizakalo yokuqashwa ngokuxoshwa. Ukucabangela lokhu kungasisiza kakhulu ekwenzeni inqubo efanele.
Ngaphandle kwalezi zimo ezimbili, isinqumo sokuthi uyimangalele yini inkampani noma cha, sithola umuntu kuphela.
Manje ake siqhubekele engxenyeni ebaluleke kakhulu yendatshana yethu, lapho sesixoshiwe Kufanele sicele isikhathi esingakanani isiteleka? Futhi sikucela kanjani?
Kubalulekile ukuthi sikuqonde ukuthi ukungasebenzi kuyinzuzo ukungasebenzi okubambe iqhaza; Futhi ukuze sikwazi ukufinyelela kulo mhlomulo, kuyisidingo ukuthi sinikele ekuqashweni kwethu okungenani izinsuku ezingama-360, noma okufana nonyaka owodwa. Uma ungahambisani nalokhu, noma ezinye izidingo zokucela ukungasebenzi, usengacela uxhaso lomnikelo onganele, okuwusizo olwenziwe ukuze kuxhaswe labo abakulesi simo esingesihle.
Futhi kufanele kucaciswe ukuthi ukucela laba bobabili kuyisinqumo, ngakho-ke akuphoqelekile ukuthi uma kwenzeka sixoshwa, sicela isiteleka. Lesi simo saziwa njengokonga ukungasebenzi. Lokhu kungenxa yokuthi uma nje singakwazi ukuqoqa ukungasebenzi Kuzoncika esikhathini esinikele ngaso, futhi uma sisebenzisa ukungasebenzi bese sithola umsebenzi, i-akhawunti yomnikelo izoqala kabusha, okungenzeki uma sisindisa ukungasebenzi. Ngokwesibonelo, singasho ukuthi uma kamuva ngemuva konyaka sinikele, asikuceli ukungasebenzi, futhi sithola umsebenzi ngemuva kwezinyanga ezintathu, sizoqala ukunikela ngokungeza izinyanga ezisetshenzelwe unyaka esiwugcinayo .
Isikhathi esinqunyiwe sokukwazi ukwenza inqubo yokucela ifayili le- inzuzo izinsuku eziyi-15 zebhizinisi ukubala kusukela lapho ubudlelwano bokuqashwa bunqanyuliwe. Kepha kunesimo esikhethekile, lapho, uma inkampani isikhokhela ukukhokhelwa kwezinsuku zeholide ezingathathwanga, kuzofanele silinde lezo zinsuku zidlule, ukuze sikwazi ukubala isikhathi sethu sezinsuku eziyi-15. Ngamanye amagama, uma besikhokhelwe izinsuku ezingama-5 zamaholide angathathwanga, kuzofanele silinde lezo zinsuku ezi-5, bese kuthi usuku lwesithupha kube usuku lwethu lokuqala lomnqamulajuqu ukucela isiteleka.
Into yokuqala okufanele siyenze cela ukungasebenzi ukucela ukuqokwa nomsebenzi wombuso oqasha umphakathi. Kubalulekile futhi ukuthi sibhaliswe njengabafuna imisebenzi, ukuze inqubo yenziwe ngendlela efanele. Kungenzeka ukuthi into yokuqala esiyenzayo ukucela ukuqokwa, ukuze kamuva sibhalise njengabafuna imisebenzi, ngaphandle kwalokhu kuthinta inqubo yokufaka isicelo sokungasebenzi.
Ngosuku lokuqokwa kwakho, kuzobaluleka ukuthi ofaka isicelo abonakale neyakhe ikhadi lokungasebenzi ukuze ukwazi ukufakazela isimo sakho. Kepha akuyona ukuphela kwento okufanele size nayo, ake sibone ukuthi yimiphi eminye imibhalo edingekayo.
Ake siqale ngefomu lesicelo, elingalandwa noma singathola ikhophi ehhovisi lokuqashwa; nathi kufanele sithwale umazisi wethu osemthethweni; Uma kusebenza, kubalulekile ukuletha ukuhlonza izingane ezivezwe esicelweni. Incwadi yomndeni kufanele futhi ithwelwe. Kumele futhi siphathe i- ubufakazi bobunikazi obuhambisana ne-akhawunti yasebhange yomuntu othole umhlomulo.
Omunye umqulu obaluleke kakhulu isitifiketi senkampani, okumele sivalwe futhi sisayinwe yinkampani, ukuze ukusebenza kwayo kuqinisekiswe; Uma kwenzeka inkampani isisebenzisa ngale ndlela, lesi sitifiketi singathunyelwa ngekhompyutha.
Uma kwenzeka sinakho usebenze itoho, lokhu eminyakeni yethu eyisithupha eyedlule, kubalulekile ukuthi kube nezinkontileka ezibhekisa emisebenzini eshiwo, ngale ndlela kuzokwazi ukubalwa kahle inani losuku esilicaphune ngale ndlela nesikhathi lapho sebenzisa ukusebenza kwethu.
Kumele kuqashelwe ukuthi esimweni lapho singeke sikwazi ukwethula yonke imibhalo yethu ngesikhathi, kufanele siye lapho kuqokwa khona, sisho isimo sethu ehhovisi bese sinikezwa Izinsuku zebhizinisi eziyi-15 ngaphezulu kusukela ngosuku lokuhambela kwethu ukuze sikwazi ukuba namaphepha; Uma kwenzeka sidlula lesi sikhathi, isicelo sizofakwa kungobo yomlando.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Ilondoloza » Ikhaya » Umnqamulajuqu wokucela ukungasebenzi